Fahafatesana ho an'ny vahiny pelaka ao amin'ny Hotely Beverly Hills na Hotel Bel ‑ Air? Dorchester Collection dia namoaka fanambarana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fahafatesana ho an'ny vahiny pelaka ao amin'ny Hotely Beverly Hills na Hotel Bel ‑ Air? Dorchester Collection dia namoaka fanambarana
Ny Beverly Hills Hotel sy Hotel Bel-Air dia ao anatin'ny Fanangonana Dorchester vondrona sy trano fandraisam-bahiny misy kintana 5 ambony ao Beverly Hills 2 km miala an'i Hollywood Andrefana, fantatra amin'ny anarana hoe Tanànan'i Gayest any Amerika.
Ny Sultan dia mifehy ny vondrona hotely Dorchester Collection, tompon'ny Beverly Hills Hotel sy Hotel Bel ‑ Air ankoatry ny hafa. Izany dia satria ny Sultan no mifehy ny masoivohon'ny Brunei Investment Agency (SWF). Halan'ny Sultan ho faty ny pelaka.
Ny Sultan Hassanai Bolkiah dia lohan'ny Fanjakana Brunei ary iray amin'ireo olona manankarena indrindra eto an-tany ihany koa. Izy dia mahery vaika hametraka hetsika ao ambadiky ny faniriany mahafaty ho an'ny fiarahamonina LGBT. Ny fitoraham-bato ny mpitsidika ny LGBT any Brunei no lalàna hatramin'ny rahampitso.
The Sampan-draharahan'ny fampiasam-bola ao Brunei (BIA) dia orinasam-panjakana izay manao tatitra amin'ny Ministeran'ny Vola ao amin'ny Governemantan'i Brunei. Niorina tamin'ny 1983, ny biraony dia miorina ao Bandar Seri Begawan ao amin'ny Minisiteran'ny Vola.
Izy io dia isan'ny miafina indrindra amin'ny tahirim-bolam-panjakana miorina amin'ny taona 1983, raha naka ny asa fampiasam-bola ny sultanate tamin'ny fanjakana mpanjanatany taloha, United Kingdom. Ny BIA dia manangona vola amin'ny Tahirim-bolam-panjakana momba ny tahiry ankapobeny, vola nafindra tao aminy araka ny baikon'ny sultan. Na dia orinasam-panjakana aza ny vola dia mijanona ho tsy voafaritra mazava ny zotram-bolany sy ny an'ny fianakavian'ny mpanjaka, ka mahatonga ny fampiasam-bola ho sarotra arahana.
George Timothy Clooney sy Elton John ary kintana maro hafa dia tsy mijanona intsony ao amin'ny hotely iasan'ny Fanangonana Dorchester satria misy fari-pitsipika roa mampidi-doza mampivelatra any Etazonia.
“Ny fehezan-dalàna Dorchester Collection dia manasongadina ny fitoviana, ny fanajana ary ny tsy fivadihana amin'ny sehatra rehetra iasanay, ary manome lanja fatratra ny olona sy ny fahasamihafana ara-kolontsaina eo amin'ireo vahininay sy mpiasa.. Ny fampidirana sy ny fahasamihafana dia mijanona ho finoana fototra amin'ny wAza mandefitra amin'ny endrika fanavakavahana. ”
Fanambarana voaray androany avy amin'i Brittany Williams, talen'ny serasera ho an'ny hotely roa dia manana fenitra roa eto.
Raha ny filazan-dRamatoa Williams dia mihatra amin'ny Dorchester Collection ity kaody ity ary ny mpiasa rehetra te hiasa ho an'ny vondrona hotely dia mila manao sonia ity kaody ity. Nanazava ny Fanangonana Dorchester dia an'ny Dorchester Group.
Na izany aza, araka ny lahatsoratra iray tao amin'ny Travel Weekly tamin'ny 2006, ny anarana hoe Dorchester Group dia novana ho Dorchester Collection. Raha izany no nitranga Dorchester Collection ary samy trano fandraisam-bahiny Beverly Hill dia tompon'ny mivantana Sampan-draharahan'ny fampiasam-bola ao Brunei.
Ny fananana vahiny lehibe an'ny BIA dia misy ny Dorchester Collection, izay portfolio-trano fandraisam-bahiny lafo vidy naorina tamin'ny 1996; fananana 10% ao amin'ny Paterson Securities of Australia, sy Bahagia Investment Corporation (Malaysia), mifandraika amin'ny trano sy tany.
Ny portfolio an'ny BIA, ankoatry ny fampiasam-bola ao Brunei, dia mandrakotra ny fampiasam-bola isan-karazany amin'ny fatorana, fananana vola, vola, volamena, ary trano. Manana famatsiam-bola be any Etazonia izy io.
Ny mpampiasa vola avy any Brunei dia nividy The Dorchester tao amin'ny Park Lane any London tamin'ny taona 1985 tamin'ny $ 50 tapitrisa US ary tamin'ny 1996 dia namorona ny Dorchester Collection ny BIA, fivondronan'ny hotely lafo vidy any UK, USA, France, ary Italia izay ao anatiny. BIA dia manana ny The Beverly Hills Hotel any Los Angeles izay novidiana tamin'ny $ 185 tapitrisa tamin'ny 1987 ary koa ny Hotely Grand Hyatt Singapore. Ny BIA dia manana fananana 10% ao amin'ny Paterson Securities any Australia, sy Bahagia Investment Corporation of Malaysia, mifandraika amin'ny trano sy tany.
Seranam-piaramanidina LCC vaovao no efa natomboka
Mampivelatra ny fiarovana sy filaminana ho an'ny ankizy mandritra ny dia